बैंकहरुका लागि आगामी दिन कस्ता छन्? राष्ट्र बैंक भन्छ- सरकारी खर्चले सन्तुलन निर्धारण गर्छ :: BIZMANDU
बैंकहरुका लागि आगामी दिन कस्ता छन्? राष्ट्र बैंक भन्छ- सरकारी खर्चले सन्तुलन निर्धारण गर्छ
प्रकाशित मिति: May 17, 2018 5:40 PM
काठमाडौं। वित्तीय क्षेत्रका लागि आगामी दिन कस्तो रहन्छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ- आगामी समयमा सरकारको पुँजीगत खर्चमा हुने वृद्धिले वित्तीय असन्तुलनमा सहजता ल्याउँछ।
तर, उसले विगत बारे वित्तीय क्षेत्रका बारेमा राम्रो टिप्पणी भने गरेको छैन।
‘वित्तीय क्षेत्रतर्फ समीक्षा अवधिमा कर्जाको वृद्धिदर निक्षेप परिचालनभन्दा लगातार उच्च रहँदै आएको छ,’ बिहीबार सार्बजनिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७४ चैत मसान्तमा कर्जा प्रवाह १९.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निक्षेप परिचालनको वृद्धिदर १५.३ प्रतिशत रहेको छ। यसले अद्यापि वित्तीय असन्तुलन रहेको देखाउँछ।‘
राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्बजनिक गरेको प्रक्षेपणमाथि पनि टिप्पणी गरेको छ। चालु बर्षमा कुल पुँजी निर्माणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ५१.७ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बचतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४३.९ प्रतिशत रहने अनुमान विभागले गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले भनेको छ, यसको परिणामस्वरुप आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग स्रोत अपर्याप्तता (रिसोर्स ग्याप) अनुपात ७.८ प्रतिशत रहने देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्रोत अपर्याप्तता अर्थात चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३८ प्रतिशत रहेको थियो।
बैंकहरुका लागि आगामी दिन कस्ता छन्? राष्ट्र बैंक भन्छ- सरकारी खर्चले सन्तुलन निर्धारण गर्छ को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)
Jha Ji[ 2018-05-17 07:24:06 ]
Rastra Bank le k bhanyo bhanda pani Bizmandu le yeso aafnai analysis prastut garna sake hami jasta pathak haru lai faida hune thiyo..